By adminPosted on December 11, 2018 Leave a comment on SEENAA OROMOO PDF
Author: Shaktibei Makus
Jarri isaan keeysaa gane kun mootummaa Somaaleeetiif iccitii leenjiirra turu dubbatan. Jaarra 19ffa keessatti gabrootni biyyaa Ixoophiyaarra dhufan lakkoofsan gara kuma diigdami shan 25, tilmaamama, hedduunsaani kibbaa biyyattiirra fidan.
Wareegamni isaan baasaniis seensa ni yaadata. Gundhabee Waalee Waajaroo Lubaayaa Goonaa 2. Guyyaa kanarra eegalee maqaan kanaan beekkama. Dhumarratti wanni irra gehan dafanii dirree seenanii qabsoo hidhanoo eegaluu. Akkasumaassiyaasaa mirga, dirq ama, seera fi hawaasummaa baratu.
Haalli oromio dachee Oromoo mataan isaa itti fayyadama Aadaa Uummata Oromoo waliin haala walitti hidhata godhachuu malaniin waan uumaman fakkaatu. Hojiin waraana doorii diina ummata irra ittisee nageenya hawaasa Oromoo tiiksuudha.
Aboma tadase 3 years ago. Kana malees yeroo seera itti seeraa ilaalanii rakkoo gosaa furaniidha. Araarsoo Biqilaa guddaan galateeffadha. Retrieved from ” https: Turtii BBCn jaarsa Ormaa seenas taasisee kun hundaaf deebii qaba, dubbifadhaa.
Gahee hojii Leenjii waraanaa baratu Biyya irra deemuun sirba saban wal baru Yeroo gadaan buttaa qalu goobamaatuu korma kuffisee qabaaf sadarkaan kun bakkoota adda addaatti maqaa adda addaa qaba. Gaggeessa gadaa jeechuun miseensa paartiilee siyaasaa jechuudha. Waluma galatti sadarkaa gadaa kana keessatti biyya guutuu keessa deemanii rakkoo dinagdee, hawaasaa, siyaasaa fi waraanaa furuuf itti gaafatama qaban.
Related Posts PSPIMAGE TO PDF
Bara Finfinnee keessa hiriira nagaa fi fincila hojii dhaabuutu jira ture; baruma kana Gurraandhala keessa mootummaan Hayila Sillaasee kufee Dargiin aangoo qabate; garuu ammas kaawonsiliin kun Amaaradhaan kan guuttame ture, namoota miseensa kaawonsilii kanaa keessa 25 qofatu Amaara miti.
Friday, 23 January Sirni gadaa heera saba Oromoo guutuu kan siyaasaa, dinagdee fi hawaassummaan sabichaa ittin murteeffamuu dha.
File:Seenaa fi Hidda Latinsa Oromoo – Wikimedia Commons
Bakka dhiha baha irra eegalee hanga bahaatti tuutni kun:. Oromoon waggaa dheeran duraa jalqabee sirna Gadaatin bulaa ture. Akkasumas abbaan gadaa biyya bulchu yeroo kana filamee hojii mootummaa godhaa itti jalqaba. Ummatni Oromoo kaabaan hanga Tigraaykibbaan hanga Keeniyaa faffaca’ee argama. Kanneen keessa Oromootatuu baayyata.
Gulaanta Yaalii Ajjeechaa Dr. From Wikimedia Commons, the free media repository.
Falmiin tuniis yeroo san keeysa mootummaan Somaalee lafa Oromoo qabatuuf jecha maqaa dhaaba siyaasaa WSLF Adda bilisummaa Somaalee dhihaa kan jedhamu isaaniif tolchitee turte.
Sochiin Dargaggootaa fi Qeerroo garuu hin dhaabbanne. Daldalootni kuniis Mahbuuba fi obboleetti ishii gara magaala Gondar Kaaba Ixoophiyaatti imalchiisan. Sadarkaan kun Oromoo Ituu biratti maxxaarrii jedhama.
Dargaggeessi xomboora guuree Daamaraa Masqalaa gubee, Kormoomsaa daaraa masqalaa addatti dibatee, sirba masqalaa wal jalaa qabee sirbaa yiikkisee dhiichisu, shamarran dibbeen lafa goosan jaarsi biyyaa ija irraa hafaa, horaa bulaa jedhee naannoo ibsaa masqalaa dhaabbatee yeroo itti eebbisu dha. Innis akka armaan gaditti ibsama.
Itoophiyaan har’aa odoo hin hundaa’in dura daldallii naannoo, karaa dheeraa fi daangaa qaxxaamuru Itoophiyaa har’aa, Eertiraa fi kutaan Somaaliyaa walitti hidhee ture. Seenaa Saba keenyaa gad fageenyaan nama nuuf gumaachu hin aeenaa. Bareedina shamarree kana dinqisiifate yeroo dhuma kanatti akka ishee ssenaa dirqame. Abdi 2 years ago. Onnee kan jabeessitu muraasa.
Oduu Amma Nu Ga’e: Masara warra mooti Hermann keessatti doktorrii akka fayyaa ishii ilaalu qacarame ture. Seenaa Mahbuuba akka qoratameetti akkasumas akka isheen dubbateetti. Kana boodaHogganoota waraana Somaalee kanneen waraana san hooggananii fi Ajajoonni qabsaawoota bilisummaa Oromoo walitti dhihaatanii waliin haasawaniiti turan.
Oromoon haallan kana hunda keessatti iccitii humna waaqaa qalbeeffataa deema. Iddoo isheen iitti dhalattee ofbarte immo Gumaa Jimmaa jedhamti jettees himatte. Seenaa Oromoonni akka Yajuu gara kaabatti godhan, fi keessumattuu Oromoon Arsii gara lafa saba Sumaalee fi Sidaamaatti godhan baballiinsa Amaarri gara kibbaatti godhe wajjin wal fakkaata, fi siyaasa sanyii Itoophiyaa kan harraa kana boce.
Imam 2 years ago. Irreecha Malkaa Irreechi malkaa kan adeemsifamu, wayita jiini gannaa darbuuf jedhu Baatii Fulbaanaa gara walakkaa keessatti dha. Yeroo kanatti Oolshuun weedduulle garagaraa fi Seenaa tokko tokko Bililleerra barreesse galmeesse. Bulchaan tokko bulchaa biyya biraa of eeggannoodhan ilaala garummoo yeroo baayyee kennaa fi dhaamsaa garii wal jijjiiru, tarii yoo wal waraanaa jiraatan malee.
Gorsi mootummaa tokkon kennameefis, ammatti maqaa Oromootiin qabsoo eegaluu keeysan hin labsina.